नेपाली फिल्ममा कलाकारको रोग, नातावाद र हेपाहप्रवृती की ग्रुपिजम ? -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्मी फण्डा । बलिउडमा केही दिनदेखि परिवारवाद र नातावादको कुरा चल्यो । कलाकारहरुमा नातावाद बढ्दै जाँदा अन्य कलाकारहरु डिप्रेशनमा जानु परेको चर्चा चल्यो । त्यो सेलाउन नपाउँदै नेपालमा त्यसको कपि भईहाल्यो ।